Natiijooyinka Ciyaaraha Koobka Afrika: Ghana vs Mali (1 – 0) [Sawiro] - Horseed Media
Natiijooyinka Ciyaaraha Koobka Afrika: Ghana vs Mali (1 – 0) [Sawiro] January 25, 2013
Ciyaarihii Khamiistii dhexmaray kooxaha Afrika ayaa waxaa ku kulmay Ghana vs Mali iyo ciyaarta labaad oo dhexmartay kooxaha Niger vs Dr Congo.
Ciyaarta 1aad ayaa ahayd iyadu midii ugu xiiso badneyd labadii ciyaar ee shalay la dheelay, iyadoo kooxda Ghana oo kamid ah kooxaha rajada weyn leh tartankan ay kooxda Mali hal gool uga guuleysatay, kooxda Mali ayaa iyadu horey hal mar usoo guuleysatay.
Ciyaarta labaad ee dhexmartay Niger iyo Dr Congo ayey labada dhinac keensan waayeen wax goolal ah, iyadoo kooxda DR Congo marar badan ay heleen fursado ay goolal ku dhalin karaan qeybtii hore ee ciyaarta iyo waliba qeybtii danbe, balse ka faa’iideysan waayey fursadahooda. Kooxda Niger ayaa dhibicdii ugu horeysay helay kadib markii ay ciyaartii shalay barbar-dhac la galeen kooxda DR.Congo.
Ciyaarihii [January 24] FT
Ciyaarihii January 23 FT
Ciyaarihii Salaasa [January 22]
Ciyaarihii Isniin [January 21 ]
Ciyaarihii Axadii [January 20 ]
Ciyaarihii Sabtidii [January 19] FT
Koobka Afrika ayey ku tartamayaan 16 kooxood oo loo kala qeybiyey 4 Qeybood (Groups).
Kooxahan ayaa yeelan doona min 6 ciyaar, kadib waxaa is reeb reebka Group-ka, kooxda ugu dhibco badata ayaa usoo bixi doonta wareega. Waxaana la filayaa Afarta kooxood ee kasoo baxa Groupska ay u gudbi doonaa (Quarterfinals).
Ciyaaraha Quarterfinals ayaa dhici doonaa maalmaha 2 iyo 3 Feberaayo. Kadib ciyaaraha Semi-finalka ayaa dhici doonaa 6 iyo 9 Feberaayo.
Maalinta 10ka Feberaayo ayaa la qorsheeyey inay Stadiumka Johannesburg ay ka dhacdo ciyaarta Finalka.